Lake Michigan: àgwà, si, flora na anụmanụ | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 24/12/2021 10:00 | Nkewa
El ọdọ michigan ọ bụ otu n'ime nnukwu ọdọ mmiri ise nke North America. Ọtụtụ obodo dị na United States gbara ya gburugburu, otu n’ime ha nwere aha otu ọdọ mmiri a na-adọrọ adọrọ, ihe karịrị nde mmadụ 12 na-agbakọtakwa gburugburu ya.
Ya mere, anyị ga-enyefe akụkọ a iji gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Ọdọ Mmiri Michigan, njirimara ya na mkpa ya.
2 Akụkụ Lake Michigan
3 ihu igwe Lake Michigan
4 Flora, fauna na geology
5 Akụkọ ifo n'Ọdọ Mmiri Michigan na ọchịchọ ịmata ihe
Ọdọ Mmiri Michigan bụ akụkụ nke nnukwu ọdọ mmiri dị n'okporo ụzọ United States na Canada. Mana ọ bụ kpamkpam n'ime ókèala United States. Nnyocha ndị mgbe ochie egosila na E hiwere ọdọ mmiri a ihe dị ka afọ 13.000 gara aga, ka oge ice gachara.
Ka ice na-agbaze, a na-ahapụ ọtụtụ nnukwu efere mmiri jupụtara na mmiri n'ebe ha nọ, efere ndị a, tinyere ihe ndị ọzọ mmiri mmiri, malitere na ọdọ a, dị ka anọ ndị ọzọ nọ n'ìgwè ahụ.
Ọdọ Mmiri Michigan bụ ọdọ mmiri nke abụọ n'ime otu nnukwu ọdọ mmiri; Ahụrụ m onwe m ka mụ na Ọdọ Mmiri Huron na-ejikọta na Straits of Mackinac, bụ ebe mmiri ya na-ejikọta na-etolite otu mmiri nke a na-akpọkarị Ọdọ Mmiri Huron, Michigan. Ọ dị mma ịkọ na eriri ahụ bụ ụzọ ahia ahia aji dị mkpa n'oge ochie.
Ebu ụzọ hụ omimi nke ọdọ mmiri a n'oge njem njem na 1985, bụ nke onye ọkà mmụta sayensị sitere na Mahadum Wisconsin aha ya bụ J. Val Klump duziri; jisiri ike jiri ụgbọ mmiri na-agba mmiri mee nyocha iji chọpụta mita 281 ya.
Akụkụ Lake Michigan
Ihe e ji mara Ọdọ Mmiri Michigan bụ ihe dị iche na ya na ọdọ mmiri ndị ọzọ dị n'ụwa, site na njirimara ndị a ị nwere ike ịghọta ọtụtụ akụkụ nke ọdọ mmiri ahụ, n'etiti nnukwu ọdọ mmiri ọ nọ n'ọkwá nke abụọ na America.
N'echiche a, enwere ike ịsị na Ọdọ Mmiri Michigan nwere njirimara njirimara ndị a:
Ọ bụ ọdọ mmiri dị kpamkpam na United States na Ọ bụ nke mpaghara Great Lakes.
Ndị America Indiana, Illinois, Wisconsin na Michigan gbara ya gburugburu.
Ọ na-ekpuchi ebe 57.750 square kilomita, na elu nke 176 mita na a mmiri omimi nke 281 mita.
Ogologo ya dị kilomita 494 na 190 n'obosara.
O nwere usoro agwaetiti dị n'ime ime obodo a na-akpọ: Beaver, North Manitou, South Manitou, Washington, na Rock.
Ọ na-enweta mmiri site n'ọtụtụ osimiri wee sonye na Osimiri Saint Lawrence n'ime ọdọ mmiri ya.
Ọtụtụ obodo gbadoro ụkwụ n'ụsọ oké osimiri ya, mana ndị a ma ama bụ Chicago, Milwaukee na Muskegon.
A na-eme ịkụ azụ egwuregwu na ịzụ ahịa n'ime ọdọ mmiri ahụ, a na-ejide trout na ụdị ndị ọzọ, na-ewebata salmon.
Onye France na-eme nchọpụta bụ́ Jean Nicolet chọtara ya na 1634.
Na nke a ọdọ pụtara ájá dunes kpuchie na-acha akwụkwọ ndụ ahịhịa ndụ na osimiri cherị, ọbụna ke mbubreyo okpomọkụ na mmiri ebe a dị jụụ na uzo, na okpomọkụ bụ obi ụtọ.
Enwere nkume Petoskey na ọdọ mmiri Michigan. Ndị a bụ ihe ncheta mara mma si n'ọdọ mmiri ahụ. A na-ewere ha dị ka nkume ndị ọchịchị nke ọdọ mmiri ahụ. Ha na-achọ mma nke ukwuu. Ha nwere ọdịdị fossils ma bụrụ nke a pịrị apị nke ọma. Ha bụ ndị pụrụ iche na mpaghara ma karịrị 3. Otu narị afọ na iri ise.
ihu igwe Lake Michigan
Nke a bụ ọdọ mmiri mara mma, a na-atụ aro ka ị gaa na ya karịsịa n'etiti June na Septemba, ebe ọ bụ na ihu igwe na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ n'oge ndị a, ọ bụ ezie na oyi na-atụ oyi. Okpomọkụ dị na mpaghara a na-adịkarị n'etiti -7 Celsius C na 27 Celsius C, na ụkpụrụ ndị a na-adịkarịghị agbanwe nke ọma, ma ọ bụrụ na ha emee, ha agaghị eru -14 Celsius C ma ọ bụ gafere 30 Celsius C. Ma eziokwu dị ugbu a dị iche, ebe ọ bụ na a kwadoro okpomọkụ dị ka -45 Celsius C, nke na-akpata Let mmiri nke Ọdọ Mmiri Michigan jụrụ oyi.
Mmiri ya na-eche ihu ihe a na-akpọ mmetụta ọdọ mmiri: n'oge oyi, ifufe na-eme ka ikuku na-emepụta snow, ma n'oge ndị ọzọ, mgbe ha na-amịkọrọ okpomọkụ ma mee ka ikuku dị jụụ n'oge okpomọkụ na n'oge mgbụsị akwụkwọ, ha na-achịkwa okpomọkụ. Nke a na-enye ohere ka eriri mkpụrụ osisi pụta, nke bụ oge a ga-egbute mkpụrụ osisi buru ibu na mpaghara ndịda.
Flora, fauna na geology
Dị ka ọtụtụ ọdọ mmiri, ọdịdị ọdịdị ala nke Ọdọ Mmiri Michigan bụ na enwere ịda mbà n'obi na ala, ebe a na-anakọta mmiri n'ọtụtụ osimiri; Na mgbakwunye na ọtụtụ mineral dị ka ígwè, e mesịrị bufee mineral ndị a n'Ugwu Appalachian. Site na mpaghara ndị na-emepụta coal.
Ọdịdị ala nke ala dị n'ógbè ahụ na-eme ka ha baa ọgaranya na mmepụta nri n'ihi na ha na-eme nri nke ọma ma nwee nnukwu ọhịa. Ọdọ Mmiri Michigan bụ nke e ji mara na ọnụnọ swamps nke mmiri wakporo; enwere ahihia toro ogologo, savannas, na ebe aja aja toro ogologo, nke niile na-eme ka ebe obibi mara mma maka anụ ọhịa.
N'echiche a, azụ dị ka trout, salmon, snook na pike perch na-anọchi anya anụmanụ ya, ha niile dị mma maka ịkụ azụ egwuregwu. Enwekwara crawfish, sponges, sea lamprey, ugo na ọtụtụ ụdị nnụnụ ndị ọzọ dị ka. swans, geese, crow, ọbọgwụ, udele, egbe na ihe ndị ọzọ, ebe ọdọ mmiri ahụ nwere nnukwu anụ ọhịa.
Akụkọ ifo n'Ọdọ Mmiri Michigan na ọchịchọ ịmata ihe
Dị ka ụlọ ọrụ njem njem & ntụrụndụ si kwuo, ọdọ mmiri Michigan gbara ya gburugburu akụkọ ihe mere eme dị ka Loch Ness na Scotland, ebe a na-ekwu na e nwere nnukwu anụ ọhịa nke nwere ọtụtụ àgwà ndị dị na mbụ nke achọpụtala na ọ bụ ya na-enye ọrụ njem nlegharị anya maka mpaghara ahụ. kemgbe 1818.
Ọtụtụ ndị mmadụ kwenyere na nnukwu anụ ọhịa a dị ka agwọ bụ n'ezie, dị ka akọwara ya, ọ bụghị n'ezie, n'ihi na ọ dịghị onye bịakwutere ya, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ọ dịghị onye na-ese foto ya nke ọma, n'ihi ya, a na-ewere nke a dị ka akụkụ nke akụkọ ifo na ndị bi na ya. mpaghara ikwubiga okwu ókè iji dọta njem nlegharị anya.
Ị chere na enwere nnukwu anụ na ọdọ mmiri Michigan ma ọ bụ na ọ bụghị, nke a bụ ohere na-adọrọ mmasị izute ya ma gaa ezumike, n'ihi na ị nwere ike igwu mmiri na mmiri ya, kporie ndụ ụbọchị ezumike n'ime ọhịa ma ọ bụ mụta banyere ya. Maka ndị hụrụ snow na oyi, mpaghara a na-agbaze n'oge a n'afọ, n'ihi ya ị nwere ike ịme egwuregwu oyi dị ka ski.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu gbasara Ọdọ Mmiri Michigan na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Ọdọ mmiri Michigan